रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिगमा के-के भयो आज ? हेर्नुहोस् – Vision Khabar
रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिगमा के-के भयो आज ? हेर्नुहोस्
। ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार २०:११ मा प्रकाशित
सुर्खेत । सुर्खेतमा जारि रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग अन्तर्गत सातौँ दिनको खेलहरुमा एबिसी क्रिकेट क्लब, रुपन्देही ११ र धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले जित हात पारेका छन्।
आज सम्पन्न खेलहरु पछि समुह बि बाट ४ खेलमा ४ वटै जितको साथ धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले तथा ४ खेलमा ३ जित र १ हार पछि मध्य-पश्चिम क्रिकेट क्लबले सेमीफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ। समुह ए बाट रुपन्देही ११ ले ४ खेलमा ४ वटै जितको साथ सेमीफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ भने बिहिबार हुने खेलपछि दोश्रो टिमको टुंगो लाग्नेछ।